China PES inopisa inyauka inonamira firimu yealuminium paneeli vagadziri uye vanotengesa | H&H
Ukobvu / mm 0.1 / 0.12 / 0.15
Upamhi / m / 1m sekugadzirisa
Kunyorera nzvimbo 70-112 p
Unyanzvi hwekushandisa muchina wekupisa-kupisa: 150 ℃ 8-12s 0.4Mpa
HD112 inogadzirwa ne polyester. Iyi modhi inogona kugadzirwa nepepa kana isina bepa. Kazhinji inowanzo shandiswa pakushongedza aluminium chubhu kana pani. Isu tinoigadzira yakajairwa hupamhi hwe1m, imwe upamhi inofanirwa kuve yakagadzirirwa. Kune akawanda mafomu ekushandisa eichi chirevo. HD112 inoshandiswa pakubatanidza machira akasiyana siyana uye machira, PVC, ABS, PET uye mamwe mapurasitiki, matehwe uye akasiyana matehwe ekugadzira, meshes, aluminium foil uye aluminium mahwendefa, uye veneer. Tinogona kuita kuti ukobvu 100micron, 120micron uye 150 micron.
HD112 Hot nyungudika namira firimu iri zvinowanzodavirwa kushandiswa pafiriji evaporator lamination. Kazhinji iyo lamination zvinhu aruminiyamu pani uye aruminiyamu chubhu kunyanya kune iwo aruminiyamu ane unhani pamusoro. Kunze kwezvo, Kutsiva chinyakare kunamatira, kunopisa kunyauka kunamatira firimu lamination rave iro hombe dhizaini iro vazhinji vemagetsi vagadziri vakagamuchirwa kwemakore mazhinji. Iyi modhi inopisa-kutengesa kumaodzanyemba kweAsia.
PES inopisa inopisa yakanyunguduka inonamira firimu inogona zvakare kushandiswa kune imwe machira lamination uye simbi yekubatanidza.Semuenzaniso, kupisa kubatana kwevamwe musono musono masaga nemabhegi. Uye zvakare, ichi chigadzirwa chinogona zvakare kushandiswa mune zvemukati zvemukati kunyorera, senge thermal kubatanidza kwemota matai, siringi nezvimwe zvigadzirwa. PES firimu ine akasiyana maficha, angave machira machira kana simbi zvinhu, iko kwekubatanidza kuita kwakanaka kwazvo.
Pashure: PO inopisa inyauka inonamira firimu yefriji evaporator
Zvadaro: PES inopisa inopisa yakanyunguduka inonamira firimu
PEVA musono yekuisa chisimbiso tepi kune inogona kuraswa ...
PO inopisa utsotso namira firimu kuti firiji Eva ...